कति छ बाबा रामदेवको जमीन ? Archives - Nepal Japan
नेपाली समय : 02:52:21
जापानी समय : 06:07:21
Tag: कति छ बाबा रामदेवको जमीन ?
कति छ बाबा रामदेवको जमीन ?
सन् २००७ सातमा योगगुरु बाबा रामदेवले आफ्नो पतञ्जली आयुर्वेद सुरुवात गरे, त्यतिबेला उनले सञ्चालन गरेको यो कम्पनीले यस्तो गति लिन्छ भन्ने कसैले पनि अनुमान गरेका थिएन्न । तर उनको कम्पनीले १० वर्षमै उत्पादनको क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई चुनौती दिएको छ ।
किनभने विश्वका १ सय देशमा त रामदेव गएर योग सिकाइसकेका छन् । विभिन्न ब्यानरदेखि लिएर टेलिभिजनका पर्दासम्म अहिले पतञ्जली आयुर्वेद उत्पादनका बस्तुहरुको प्रचारप्रसार पनि आक्रामक ढंगमा आइरहेका छन् ।
त्यतिमात्र होइन, ती सामग्रीमा स्वर र पात्रसमेत रामदेव आफैँ देखिने गरेका छन् । पुरानो आँकडा अनुसार, बाबा रामदेवको सम्पत्ति २२ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।
उपभोग्य बस्तु उत्पादनसँगै पतञ्जलीले आफ्नो कम्पनी विस्तारका लागि विभिन्न स्थानमा नयाँ प्लान्ट र फूड पार्क पनि बनाइरहेको छ । रामदेवको पतञ्जली कम्पनीले उत्पादन गरेका बस्तुको विषयमा धेरैलाई थाहै छ तर उनको जमीन कति र कहाँ छ भन्ने विषयमा भने कमलाई मात्र थाहा छ ।
पतञ्जली आयुर्वेदका लागि भारतको असम, तेजपुरमा हर्बल र मेगा फूड पार्कका लागि एक सय ५० हेक्टर जमीन दिइएको छ । तर इकोनोमिक टाइम्सकाअनुसार बाबा रामदेवले असमका उद्योगमन्त्री चन्द्र मोहन पटवारीसँग भेट गरी ३३ हेक्टर जमीन थप मागेको लेखेको छ ।
त्यसैगरी, उत्तर प्रदेश सरकारले गतवर्ष पतञ्जली आयुर्वेदको ग्रेटर नोएडामा दुई हजार करोड रुपैँयाको फूड पार्क बनाउनका लागि अनुमति दिइसकेको छ । यसका साथै यमुना एक्सप्रेस वेमा चार सय ५० हेक्टर जमीन दिन पनि सरकार तयार भएको छ ।
शिवराज सिंह चौहानको मध्य प्रदेशमा पनि बाबा रामदेवको पतञ्जली कम्पनीका लागि चार सय हेक्टर जमीन दिइने भएको छ । त्यस्तै, नागपुरमा पतञ्जली मेगा फूड र हर्बल पार्कको पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । यस फुड पार्कका लागि दुई सय ३० हेक्कटर जमीन दिइएको छ ।
पीटीआइले बताएअनुसार मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फर्नान्डिजसँग पतञ्जलीका लागि २५ लाख रुपैँयामा एक हेक्टर जमीन दिनका लागि अनुमति भइसकेको छ । पतञ्जली आयुर्वेदको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र हरिद्वारमा रहेको छ ।
आफ्नो कम्पनीलाई रामदेवले भारतमा मात्र नभई नेपालमा पनि विस्तार गर्ने सहमति गरिसकेको छ ।
Posted in विश्व समाचारTagged कति छ बाबा रामदेवको जमीन ?